Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Ny seranam-piaramanidina Frankfurt hanokatra indray ny Northway Runway manomboka ny 1 Jona
Fraport - ilay orinasa miasa ny seranam-piaramanidina Frankfurt - dia nanapa-kevitra ny hanokatra ny làlambe hiandrasana fiakaran'ny hetsiky ny fiaramanidina amin'ity fahavaratra ity.
Ny fanapaha-kevitra hanohy ny fampiasana ny Northway Runway dia nataon'i Fraport niaraka tamin'i DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS)
Ny DFS dia tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana amin'ny rivotra any Alemana
Vonona tsara ny seranam-piaramanidina Frankfurt amin'ny fampitomboana ny fifamoivoizana amin'ny mpandeha amin'ny vanin-taona fahavaratra
Ny talata 1 jona dia ny Northwest Runway (07L / 25R) ao amin'ny Seranam-piaramanidina Frankfurt (FRA) hanomboka indray ny asa. Fraport - ilay orinasa miasa ny seranam-piaramanidina Frankfurt - dia nanapa-kevitra ny hanokatra ny làlambe hiandrasana fiakaran'ny hetsiky ny fiaramanidina amin'ity fahavaratra ity. Ireo fanantenana ireo dia tohanan'ny vinavinan'ny Eurocontrol, masoivohon'ny fandrindrana ny fifamoivoizana an'habakabaka. Efa nisy ny fitomboan'ny fialan-tsasatra sy ny fidinana an-tanety any Frankfurt tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Raha mitombo hatrany ny isa dia takiana ny làlambe hiantohana ny fitohizan'ny fihodinana hatrany ary hisorohana ny fahatarana. Ny fanapahan-kevitra hanohy ny fampiasana ny Northway Runway dia nataon'i Fraport niaraka tamin'i DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS). Ny DFS dia tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana amin'ny rivotra any Alemana.
Ho setrin'ny fianjeran'ny volan'ny fifamoivoizana tampoka teo afovoan'ny areti-mifindra coronavirus, Fraport dia nanala ny serivisy Northwest Runway teo anelanelan'ny 23 martsa sy 8 jolay 2020. Nikatona indray ny lalambe nanomboka ny 14 desambra 2020, ary miasa ho toeram-pijanonana vonjimaika toerana ho an'ny fiaramanidina.
Vonona tsara ny seranam-piaramanidina Frankfurt amin'ny fampitomboana ny fifamoivoizana amin'ny mpandeha amin'ny vanin-taona fahavaratra. Ao amin'ny Terminal 1, ilay hany terminal miasa ankehitriny, Fraport dia nampihatra fepetra fidiovana manohitra ny COVID-19 amin'ny faritra rehetra ampiasain'ny mpandeha. Misy fampahalalana bebe kokoa Eto.